Zimbabwe Politics News Archives - The Zimbabwean Progressive
Zimbabwe Politics News
Mugabe’s election rigging machine alive and well in President ED Mnangagwa’s Zimbabwe
July 20, 2018 July 28, 2018 Obert Madondo
Zimbabwe President ED Mnangagwa inherited former president Robert Mugabe’s sophisticated election rigging machinery, which will likely propel him to victory during the Southern African country’s 2018 harmonized elections, scheduled for July 30th.
July 8, 2018 July 8, 2018 Zimbabwean Progressive
Zimbabwe’s first election without Robert Mugabe may produce one of the most gender-imbalanced legislatures in the world. So far, President Emmerson Mnangagwa’s ruling Zanu PF party has fielded only 19 women out of 210 candidates contesting parliamentary seats across the country.
After Mugabe: why the role of Zimbabwe’s army can’t be trusted
November 28, 2017 November 28, 2017 Zimbabwean Progressive
The Zimbabwe military ousted former president Robert Mugabe to save a disintegrating ruling Zanu PF party. Can its continued involvement in Zimbabwean politics under installed president Emmerson Mnangagwa guarantee essential reforms, democracy and justice?
Robert Mugabe shoots self in the foot by firing vice-president Emmerson Mnangagwa
November 6, 2017 November 17, 2017 Obert Madondo
In a development that’s likely to doom his re-election prospects during the much-anticipated 2018 elections, Zimbabwean President Robert Mugabe just fired his long-time Vice President Emmerson Mnangagwa with immediate effect.